Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: iray andro mialoha | NewsMada
Nohadihadin’ny zandary nandritra ny adiny telo : Nanizingizina ny fahitany ireo karandohan’olona i ...août 16, 2019
Le fusible a sauté : Le DG de la Jirama limogé ...août 16, 2019
La nouvelle route Tsididy – Antsalova : défi aux dahalo dans le far-west
Nirefodrefotra mandra-marain’ny andro ny basy: jiolahy telo maty voatifitry ny zandary, 5 azo sambo-belona
Le fusible a sauté : le Dg de la Jirama limogé
Nohadihadian’ny zandary nandritra ny adiny telo: nanizingizina ny fahitany ireo karandohan’olona i Elisabeth
Visite du Pape François : plus de 7.500 éléments des forces de l’ordre mobilisés
Fahatongavan’ny papa François: nametraka lamina sy fepetra ny Emmo/Nat
Prérogative parlementaire : chef de l’opposition, les présidents des partis exclus
Fito mianadahy voasambotra: efa noravaina saika hamidy no sarona ilay Sprinter halatra
Energie domestique : pénurie de pétrole lampant
Fanahiana halatra taova: nirefodrefotra ny basy olona roa voasambotra
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: iray andro mialoha
Par Les Nouvelles sur 18/01/2019
Rahampitso no hisantarana fehi-potoana vaovao, andro fiakaran’ny faharoa amin’ny Filohan’ny Repoblika faha efatra eo amin’ny fitondrana. Andro lehibe izany voalohany ho an’ilay olona voafidin’ny vahoaka nanankinany fitokisana mikasika ny fitantanana ny raharaha-pirenena mandritran’ny dimy taona, andro manana ny lanjany koa ho an’ny mponina manontolo, eo no hiatomboka ny fitondrana hitondra fiovana na tsia. Matoa moa maniry fiovana voalaza tsy mila ho tononina ny tsy fietezan’ny zava-misy. Tsy mila anaovana jery todika intsony angamba ny teo aloha, tsy vitan’ny mety handratra ny maso mitodika na ahakely finona nohon’ny fibaribarin’ny asa miandry ho fanarenana ny faharavaravana miseho, mamoha fota-mandry hoy ny fitenenana. Na izany aza tsy mandry toy izany ny fotaka itsabahana andavanandro, mandrevo tsy manam-paharoa nohon’ny fitobaky ny fahasahiranana. Raha tena mipetraka ny fikasana momban’ny fanaovana fanovana, tsy afaka atao safobe mantsina fotsiny ny fandinihana ny toe-draharaha, indraindray aza mila hatrany amin’ny famadibadihana tsirairay an’ireo toerana ferena izay efa misy manangatra.
Tsy vita mora izany, ary mety hiteraka fangirifirina noho izany mila fitandremana ny fikirakirana mba tsy hanampy trotraka ny fitadiavan’ny andaniny na ny ankilany disadisa. Ao anatin’izay no tokony andraisana ny filazan’i Andry Rajoelina ny faniriny ho Filohan’ny Malagasy rehetra.
Izany hoe na eo aza ny tsy fitovizan-kevitra momban’ny fomba anaovana ny fanavaozana ho an’ny asa fampandrosona, na eo aza ny fahalalahana momban’ny fijorona ho mpanohitra, tapitra hatreo ny fanaovana adilahy pôlitika. Nohon’ny toe-tsaina manjaka hatry ny ela, tsy maintsy manenjana ny fitondrana ho fanatanterahana an’izany, sady mifehy tena no mampiseho fahenterana amin’ny fanamelohana an’izay mihoa-pefy.
Aty ampiandohana dia efa ho tazana izany, na eo amin’ny sehatry ny serasera aza dia samy tokony anaja tena. Ahoana moa no tsy ihozongozonan’ny fifampitokisana, misy ireo sady tsy mijanona amin’ny fisehona ho mpananatra nefa tsy mampiato ny teny tsy mendrika hatramin’ny fanompana an’izay rehetra tsy mitovy hevitra amin’ny olona arovany. Sedran’ny fanondrota-tena anan-jo hitsara ny sasany amin’ny anaran’ny fahalalahana eo amin’ny fanaposahan-kevitra, ny fifehezan-tena tsy hihoatra ny fefy fiarovana ny zo an’ny sasany.
Telma: nanolotra fankasitrahana ho an’ny taranja basikety sy Atletisma 17/08/2019
Rallye Boeny: mitarika vonjimaika i Fred sy A.T 17/08/2019
Lalao Afrikana 2019: hisantatra ny fifaninanana ny taranja Judo 17/08/2019
Nodiovina ny lalana handalovan’ny papa François 17/08/2019
Vaovao tambatra 17/08/2019
Jery taratra… herinandro: miroso miandalana… azo antoka